Ukuhlaselwa kukaJackson Mthembu kutshengisa ukungaziphathi kahle - Ramaphosa | News24
Ukuhlaselwa kukaJackson Mthembu kutshengisa ukungaziphathi kahle - Ramaphosa
Cape Town - ISekela likaMengameli uCyril Ramaphosa usephawulile ngezinkinga ezikhona kwikhokhasi ye-ANC, ngemuva kokuthi amalungu ayisithupha e-ANC ePhalamende esole uSotswebhu uJackson Mthembu "ngokusebenzisana" neDemocratic Alliance.
La malungu e-ANC abambe isithangami sabezindaba ngoMsombuluko ebusuku - esisakazwe ku-ANN7 - egxeka uMthembu, ikhomishini yophenyo ngodaba lwakwa-Eskom, kanjalo nofakazi ohamba phambili u-Advocate Ntuthuzelo Vanara.
Basole uMthembu ngokusebenzisana ne-DA ukuhlela inkulumompikiswano ngodaba lokubanjwa koMbuso ngobhongwane ngoLwesibili ebusuku, bakhala nangokuthi uphenyo ngo-Eskom alusho lutho ngengxiwa abaqhoqhobele umnotho.
URamaphosa ubuzwe ukuthi kuthini ukuphawula kwakhe ngalolu daba ngesikhathi enesidlo sasekuseni nePress Gallery Association ngoLwesine.
"Lolo wudaba olubucayi kakhulu futhi luyakhathaza, ngokubona kwami isenzo samalungu ePhalamende sokuhlasela usotswebhu wawo ngaleya ndlela kutshengisa ukungaziphathi kahle," kuphendula uRamaphosa.
"Ukube bekukhona ukungaboni ngasolinye nosotswebhu bekumele balandele imigudu yenhlangano.
"Luyadingidwa lolu daba, kepha indlela izinto ezenzeke ngayo ayamukelekile," esho.
URamaphosa uphinde wavikela la malungu e-ANC ayisithupha ekutheni ahambisana neState Capture.
"Angicabangi ukuthi bangathanda ukubonakala sengathi bahambisana nokubhozonyelwa koMbuso. Lolu daba, njengoba bese ngishilo, silufakela izibuko."
UMthembu usefake isimangalo kwiBroadcasting Complaints Commission.